နောက်ကလိုက်သည် - Myanmar Network
Posted by Arakan Indobhasa on January 7, 2013 at 9:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Follow - နောက်ကလိုက်သည်။
Follow me and I’ll show you where the library is.(Noun Clauseကို Object နေရာမှာထားပုံ)
You drive ahead and I’ll follow.
မင်း ရှေ့ကမောင်းလေ။ ငါ နောက်ကနေလိုက်မယ်။
Follow sb (somebody) around - (သွားတဲ့နေရာတိုင်းကို) နောက်ကနေလိုက်ပါသည်။
Journalists followed the couple around everywhere.
Followed by sb (somebody) - လိုက်ပါလျက်။ ခြံရံလျက်။
The woman entered the room, followed by three little children.(Past Participle Phrase [ ရင်း၊ လျှက်၊ ရင်းနဲ့၊ လျှက်နဲ့ - များသောများဖြင့် ဘာသာပြန်)
အမျိုသမီးကြီးတစ်ဦးဟာကလေးငယ်သုံးယောက် (သူမရဲ့နောက်မှ)လိုက်ပါလျက် အခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။
(အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာအခန်းထဲသို့ဝင်းသွားခဲ့တယ်။ သူမနှင့်အတူကလေးငယ်သုံးယောက်ကလည်းလိုက်ပါကြတယ် - ဟုဆိုလိုသည်။)
The Buddha came to Dhannavadi (Dhanyawaddy) Kingdom in 123 M.E. (Maha Era), followed by Five Hundred Disciples and alighted on the top of Selagiri Hill situated on the east bank of Kachapanadi (Kaladan) River.
မဟာသက္ကရာဇ် ၁၂၄ ခုနှစ်တွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် တပည့်သံဃာငါးရာခြံရဲလျက် ဓညဝတီရက္ခိုင်ပြည်ကြီးသို့ ကြွရောက်တော်မူခဲ့ပြီး၊ ကစ္ဆပနဒီ (ကုလားတန်)မြစ်၏ အရှေ့ဘက်၌တည်ရှိသောသေလာဂီရိကျောက်တော်တောင်ထိပ်၌ ဆင်းသက်ရပ်တန့်တော်မူခဲ့၏။
Follow sb out/ down/ across, etc. (ဖြတ်၍/အထဲသို့) နောက်ကနေလိုက်ပါသည်
She didn’t notice that Jack had followed her into the kitchen. (Noun Clase – Object နေရာမှာသုံးထားပုံ)
သူမနောက်က “ဂျက်” မီးဖိုးချောင်ထဲသို့ လိုက်လာတာကိုသူမသတိမထားမိခဲ့ဘူး။
I didn’t notice thatatiger had followed me across the river.
မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးကျားတစ်ကောင် ငါ့နောက်သို့ လိုက်လာတာကိုငါသတိမထားမိခဲ့ဘူး။
Run after sb/ go after sb - နောက်ကပြေးလိုက်သည်။ နောက်ကနေအဆော့တလျင်လိုက်သည်။
A group of little girls ran after him to ask for his autograph.
Yesterday beggars were going after her to beg some money.
Chase - လိုက်သည်။ (ဖမ်းဆီးရန်အတွက်။)
Chase sb across/ up/ down, etc. (ဖြတ်၍/ ဆင်း၍/ တက်၍) လိုက်သည်။ (ဖမ်းဆီးရန်အတွက်။)
The farmer chased the children across the field.
Chase after - နောက်မှလိုက်သည်။ (ဖမ်းဆီးရန်အတွက်။)
Two men chased after the robbers, but they managed to escape.
လူနှစ်ယောက်ဟာဓားပြများနောက်ကနေပြီးဖမ်းဆီးဖို့လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လွတ်မြောက် ခဲ့ကြတယ်။
Pursue - နောက်ကနေခြေရာခံလိုက်သည်။ (ဖမ်းဆီးရန်အတွက်) [ အထူးသဖြင့် သတင်းနှင့်ဝတ္ထုတို့တွင် သုံးသည်။] (Formal)
Police pursued the gunman into an abandoned building.
ရဲသားများဟာသေနတ်သမားနောက်ကနေပြီးလူသူမနေတဲ့ အဆောက်အဦးထဲသို့ ခြေရာခံပြီးလိုက်သွားခဲ့တယ်။
Tail - နောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လိုက်သည်။ (လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဘယ်ကိုသွားပြီးဘာတွေလုပ် နေတယ်ဆိုတာကိုသိရန်အတွက် (Informal)
Do you think that police car is tailing us?(Noun Clase – Object နေရာမှာသုံးထားပုံ)